Moya China Ipayipi Iivalvu umzi-mveliso kunye nababoneleli |Arex
I-valve, kubunjineli bomatshini, isixhobo sokulawula ukuhamba kwamanzi (ulwelo, iigesi, i-slurries) kumbhobho okanye kwenye indawo evalelekileyo.Ulawulo kusetyenziswa into eshukumayo evula, ivale, okanye ivalele ngokuyinxenye indawo evulekileyo kwipaseji.Iivalvu zezi ntlobo ezisixhenxe eziphambili: iglowubhu, isango, inaliti, iplagi (umqhagi), ibhabhathane, ipapa kunye nespool.
Zisebenza njani iivalvu?
Ivalve sisixhobo somatshini esivala umbhobho ngokuyinxenye okanye ngokupheleleyo ukutshintsha isixa solwelo oludlula kuwo.
Zisetyenziswa phi iivalvu zokulawula izinto?
Ivalve yolawulo yivalve esetyenziselwa ukulawula ukuqukuqela kwamanzi ngokuguquguquka kobungakanani bendlela yokuhamba njengoko ilawulwa ngumqondiso ovela kumlawuli.Oku kuvumela ulawulo oluthe ngqo lwesantya sokuhamba kunye nokulawulwa kwesiphumo sobungakanani benkqubo efana noxinzelelo, ubushushu, kunye nenqanaba lolwelo.
Ziziphi iintlobo ezahlukeneyo zeevalvu?
Iindidi ezahlukeneyo zevalvu zikhoyo: isango, iglowubhu, iplagi, ibhola, ibhabhathane, itshekhi, i-diaphragm, i-pinch, i-pressure relief, i-valve yokulawula njl. Nganye kwezi ntlobo zinenani leemodeli, nganye ineempawu ezahlukeneyo kunye nobuchule obusebenzayo.
Zeziphi iindidi ezahlukeneyo zeevalvu ezisetyenziselwa ntoni?
Iivalvu zokuplaga (iivalvu zesihlalo), iivalve zebhola, & neevalvu zebhabhathane zezona ntlobo zixhaphakileyo zeevalvu ezisetyenziselwa ukufudumeza, ukungena komoya kunye nenkqubo yokupholisa umoya.Ezinye iivalvu ezisetyenziswa kwinkqubo yokubandakanya iivalvu zesango lemela, iivalvu zediaphragm, kunye neevalvu zesango.
Iindidi ezahlukeneyo zevalvu zisetyenziswa kumacandelo ahlukeneyo.kweli nqaku kukhankanyiwe 19 iintlobo iivalvu.
1. Ivalve yeglowubhu
2. Ivalve yesango
3. Ivalve yebhola
4. Ivalve yebhabhathane
5. Ivalve ye-diaphragm
6. Ivalve yokuplaga
7. Ivalve yenaliti
8. Ivalve ye-engile
9. Ivalve yepitshi
10. Ivalve yesilayidi
11. Ivalve esezantsi yokugungxula
12. Ivalve ye-Solenoid
13. Ivalve yokulawula
14. Ivalve elawula ukuhamba
15. Ivalve yokulawula uxinzelelo lwangasemva
16. Ivalve yohlobo lwe-Y
17. Ivalve yepiston
18. Ivalve yokulawula uxinzelelo
19. Khangela ivalve
Ngaphambili: Ufakelo lwe-hydraulic
Okulandelayo: Polyurethane Fine Screen Mesh
© Copyright 20102021 : Onke Amalungelo Agciniwe.> Metallic Ukwandiswa Joint Umnatha wesikrini ISeismic Expansion Joint Ivalufa yokulawula umoya 50mm Flexible Rubber Hose Isilayidi seValve yesibaso Zonke iimveliso